OTU ESI EJI TWITTER - TWITTER - 2019
AutoCAD bụ ngwá ọrụ na-ewu ewu maka ntinye ihe nlereanya 3D, imepụta na idepụta, na-enye ọtụtụ ngwaọrụ dị mfe. N'okpuru isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere wụnye software a na kọmputa na-agba Windows.
Wụnye AutoCAD na PC
Usoro nhazi niile nwere ike kewaa n'ime ụzọ atọ dị mkpa. N'okwu a, anyị ekwesịghị ichefu na a na-ahazi ụdị software ahụ n'otu n'otu maka mkpa ụfọdụ. Anyị kwuru banyere nke a na isiokwu dị iche na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Hụkwa: Otu esi eji usoro ihe omume AutoCAD
Ka ibudata ma nọgide na-eji AutoCAD, ị ga-edebanye aha na ebe nrụọrụ weebụ ukara nke Autodesk. N'okwu a, ịnwere ike ịdenye akaụntụ maka n'efu n'oge nbudata, na-eji akara ikpe maka ụbọchị 30.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ukara nke AutoCAD
Mepee peeji nke na njikọ dị n'elu wee pịa mpaghara ahụ. "Nnwale n'efu".
Ugbu a, ị ga-eji bọtịnụ ahụ "Download AutoCAD"site na ịmepe windo maka ịhọrọ ihe ndị nwere ike iwepụta.
Site na ndepụta e nyere, dobe akara na-esote "AutoCAD" wee pịa "Na-esote".
Mgbe ị gụchara ihe gbasara usoro chọrọ, pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Na nzọụkwụ na-esote site na ndepụta ndọpụta, dee nhọrọ "Onye ọrụ ahịa", họrọ nchịkwa nke sistemụ arụmọrụ gị ma debe asụsụ ị họọrọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, denye aha akaụntụ ma ọ bụ abanye na nke dị.
Ọ bụ iwu na ị ga-enye ozi a rịọrọ na mpaghara kwesịrị ekwesị ma pịa "Malite Download".
Site na windo "Chekwa" họrọ ebe kwesịrị ekwesị na PC wee pịa "Chekwa".
Mgbe emechara ya, a ga-ebudata faịlụ ahụ na kọmputa. Iji gaa window windo AutoCAD, ịkwesịrị ịmalite ya ma chere maka nbudata iji mezue.
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ a naghị emeghe windo nrụnye na akpaghị aka mgbe ị wepụsịrị faịlụ ahụ, gbanye faịlụ ahụ ebudatara site n'otu ndekọ ahụ na PC. Ọnụ ọgụgụ e mere atụmatụ ga-abụ 14-15 MB.
Maka ndozi ọzọ, ị ga-achọ njikọ ịntanetị na-enweghị njedebe. A ga-etinye ihe niile ahọpụtara ahọpụtara ozugbo na nbudata.
Maka nhazi ngwanrọ nke ngwanro a jụrụ ajụjụ, ị ga-ehichapụ oge niile mmemme na ngwa ndị chọrọ nnukwu ego nke kọntaktị PC. Ọ bụrụ na ị na-eleghara nke a anya, ọ ga-enwe ike ịdaba na usoro nhazi ahụ.
Mgbe ngwụcha nke nbudata, ntinye nke components ndị dị mkpa kwesịrị ịmalite. Dabere na arụmọrụ nke kọmputa gị, njigide nwere ike ịdị iche iche.
Na nhazi mbụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Echichi" maka nhazi akụrụngwa nke ihe niile ma ọ bụ "Ngwaọrụ na ngwaọrụ".
N'okwu nke abụọ, windo mepee na ike iji hazie ọrụ ndị ọzọ maka AutoCAD. Ịkwụsị ihe mmiri kwesịrị ịbụ ma ọ bụrụ na ị maara ihe ga-esi na omume ha pụta.
Onye ọrụ nwere ike ịgbanwe "Ụzọ ntinye" edozi ihe. Iji mee nke a, jiri ngọngọ kwesịrị ekwesị.
Iji gaa n'ihu, pịa "Wụnye". Mgbe nke ahụ gasịrị, usoro nyocha usoro usoro na ibudata faịlụ ndị dị mkpa ga-amalite.
Mgbe e mechara itinye ihe ndị ọzọ, windo nwere nkwekọrịta ikike ga-emeghe. Ịkwesịrị itinye akara na-esote ihe ahụ "Ana m anabata" ma pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Site n'iji ihe eji eme ihe, ị nwere ike iwepu ma ọ bụ nye onye ọ bụla components.
Ihe kacha mkpa na ebe a "Autodesk AutoCAD"inwe ọtụtụ ntọala dị elu. Gbanwee ha na uche gị.
Ọ bụrụ na achọrọ, dee ndekọ maka ntinye nke usoro ihe omume na ihe ndị ọzọ. Otú ọ dị, a ghaghị ime nke a nanị dị ka ihe ikpeazụ, ebe ọ nwere ike ịbụ njehie na ọrụ ahụ.
Mgbe ịmechara usoro nhazi ntọala, pịa "Wụnye".
Mbụ, wụnye ngwa inyeaka maka sistemụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ntinye nke ọbá akwụkwọ ndị isi ga-amalite. N'oge usoro a, ị gaghị ejikọta njikọ na Ịntanetị, dịka ọ bụrụ na ị nwere njehie, ị ga-amaliteghachi ọzọ.
Mgbe ị rụchara nke ọma, ị ga-enweta ọkwa.
Tupu mmalite mbido, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji regharịa OS ka ọrụ ndị arụnyere na arụ ọrụ nke ọma.
Hụkwa: Otu esi agbanye usoro
Mgbe ị na-agbanye usoro ahụ, ịnwere ike ịmalite nzọụkwụ ikpeazụ metụtara usoro ịwụnye Autodesk AutoCAD na PC.
Hụkwa: Na-edozi nsogbu na arụ ọrụ obere nke AutoCAD
Nzọụkwụ 3: Mwepụta
Pịa na faịlụ AutoCAD na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na desktọọpụ. Usoro nke ịtọ ntọala mbụ na nhazi ndị ọzọ, tinyere usoro nrụnye, ga-achọ njikọ ịntanetị.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị maara ihe ndị ọzọ Autodesk na-agba ọsọ, ịnwere ike ịsagharị akụkụ a nke isiokwu.
Hụkwa: Otu esi edozi AutoCAD
Na windo mbụ mejupụta akara "Email", na-egosi na E-mail na-eji ya mgbe ị na-ebudata ihe omume ahụ site na saịtị ahụ. Ọzọkwa, na mgbakwunye na mail, ị ga-etinye paswọọdụ site na akaụntụ Autodesk gị.
N'elu nbanye nke ọma, ị ga-eji mpio gosipụta gị gbasara ikikere eji. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ anyị, a na-egosipụta oge fọdụrụnụ nke ụdị ule ahụ.
Site na mechie windo a, ị nwere ike iji ụdị atụmatụ niile nke Autodesk AutoCAD.
Iji ogwe aka nchịkọta na aka nri aka nri, a na-akpọ windo a na aka. Na mgbakwunye, lee ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ maka ijikwa akaụntụ AutoCAD.
Hụkwa: Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na AutoCAD adịghị amalite
N'ịgbaso ntụziaka anyị, ịnwere ike ịwụnye na ịhazi usoro ihe omume ahụ maka ịmalite ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere AutoCAD, jide n'aka ịjụ anyị na ihe ndị dị n'okpuru.